अस्पतालको बेडबाटै समिक्षाले चिकित्सकलाई सोधिन्– मामालाई कस्तो छ ? – PathivaraOnline
Home > समाचार > अस्पतालको बेडबाटै समिक्षाले चिकित्सकलाई सोधिन्– मामालाई कस्तो छ ?
काठमाडौं, २२ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो मिर्गौला दिएकी समीक्षा संग्रौला यतिबेला अस्पतालमै स्वास्थ्यलाभ गरिरहेकी छन् । उनले नाताले मामा पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिर्गौला दिने निर्णय गर्दै भनेकी थिइन्, मैले मामाको मुख हेरेर होइन राष्ट्रका लागि मिर्गौला दिने निर्णय गरेकी हुँ । आफ्नो मिर्गौला दिने त्यती ठूलो निर्णय गरेकी समीक्षाले शल्यकृया पछि होसमा आउना साथ पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झिइन् ।
उनले बिहीबार बिहान चिकित्सकलाई सोधिन्– मामालाई कस्तो छ ? स्वास्थ्यलाभ गर्दै चिकित्सकको सल्लाह अनुसार झोल कुरा खान सकने भएकी समीक्षालाई आफ्नो भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यको चिन्ता धेरै थियो । उनले आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा चिकित्सकलाई सोधिनन्, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका बारेमा जिज्ञासा राखिन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौलाले काम गर्न छोडेपछि केही समय देखि उनी मामासंगै थिइन् । ६९ वर्षीय प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका हुन् । प्रत्यारोपण सफल भएपछि मामाको बारेमा सोधेको शिक्षण अस्पतालका युरोलोजी डिपार्टमेन्ट प्रमुख डाउत्तमकुमार शर्माले नेकपा नेता तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरुलाई जानकारी दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई यसअघिकै तालिका अनुसार कालो चिया दिइएको र समीक्षाले भने चियाका साथै दाल पिएको जानकारी अस्पतालले दिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई शल्यक्रिया गर्नुअघि बनाइएको तालिका अनुसार नै तरल पदार्थ खुवाइएको डा।शर्माले बताएका छन् ।
आफ्नो मृगौलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई १५ वर्ष पनि काम नदिएकोमा दुःखी अञ्जान
काठमाडौँ, २२ फागुन। आज भन्दा झण्डै १२ बर्ष अघि आफ्नो एउटा मिर्गौला दिएर अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बचाएकी अञ्जान घिमिरे ओलीलाई ओलीको दोस्रो प्रत्यारोपण सफल भएकोमा जति खुसि लागेको छ त्यतिनै दुखी पनि छिन् उनी । उनले दिएको मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि नातामा भान्जी पर्ने समिक्षा संग्रोलाको मिर्गौला अहिले प्रधानमन्त्री ओलीमा प्रत्यारोपण गरिएको हो ।
२१ वर्षको उमेरमा नाताले जेठाजु र एकै परिवार भएपनि नाताका लागि नभएर देशका लागि आफुले मिर्गौला दिएको अञ्जानले बताइन् । उनले भनिन्,‘उहाँले राजनीतिमा लागेर धेरै संघर्ष गरिसक्नुभएको थियो । देशका लागि काम गर्छु भन्ने उहाँमा जोलो जोस र जागर थियो । त्यसैले उहाँले मेरो मिर्गौला फेल भयो अब के गर्ने भनेपछि मैले एक्कासी म दिन्छु भने र दिएँ’ ।
अस्पताल भर्ना हुनु एकदिन अघि बालुटारमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको उनि बताउँछिन । प्रधानमन्त्री ओलीसंग उनले दुखेसो पोख्दै भनिन्‘ मैंले तपाईलाई १५ वर्ष पनि बचाउन सकिन’ आफुले दिएको मिर्गौलाबाट ओलीलाई १५ वर्ष पनि बचाउन नसेकेकोमा दुख लागेको छ अञ्जानलाई । अझै तिन वर्ष सहज रुपमा काम गरिदिएको भए देश र जनताका लागि ओलीले सहज रुपमा काम गर्न सक्ने उनको बुझाई हो ।
प्रहरीले बुझायो प्रचण्ड जुत्ताकाण्डकाे प्रतिवेदन, तिरूवाकाे खुल्यो यस्तो रहस्य!
चालक र महिलामा गल्ती कस्को ? बिष्टले यसरी प्रष्ट पारे ! (भिडियो)